Fiangonana Adventista Mitandrina ny Andro Fahafito eto Madagasikara: Fahasamihafan'ny versiona - Wikipedia
Fiangonana Adventista Mitandrina ny Andro Fahafito eto Madagasikara: Fahasamihafan'ny versiona
Fiangonana Adventista Mitandrina ny Andro Fahafito eto Madagasikara (hanova)
Endrik'io pejy io tamin'ny 21 Martsa 2017 à 20:50
134 octets ajoutés , il y a 5 ans
Endrik'io pejy io tamin'ny 21 Martsa 2017 à 08:16 (hanova)
Endrik'io pejy io tamin'ny 21 Martsa 2017 à 20:50 (hanova) (esory)
Poizina (Dinika | fandraisan'anjara)
Niandoha= tany Maurice nyNy niandohan’ny fahatongavan’nyFiangonana hafatraAdvantista teto Madagasikara. =▼
NY NIANDOHAN’NY FIANGONANA ADVANTISTA
Niandoha tany [[Maurice]] ny niandohan’ny fahatongavan’ny hafatra teto Madagasikara.
Niala tao [[Port-Louis]] (Mauritius) haka rivotra tany [[Eoropa]] i [[Rosalinda le MEME]] tamin’ny Jolay 1910. Tonga hatrany [[Angleterre]] sy [[Ecosse]] ary [[Pays des Galles]] izy. Naharitra herintaona ny diany tany. Rehefa izany dia nanohy ny diany nankany [[Frantsa]] izy. Niova anefa ny fandaharam-potoanany raha tonga tao [[Paris]] ka lasa izy nankany [[Suisse]]. Tonga tao [[Lausanne]] izy ary nitoby tamina Hotely iray an’ny havany manamorona ny làlana « Beau séjour » . Nisy taratasy iray natsofok’olona tamin’ny boîte aux lettres teo am-baravarany, taratasy fanasana ho amin’ny kaonferansa izy io. Lasa nankany izy ka ny lohateny novoasana dia ny hoe : « Mankaiza moa izao tontolo izao ? Ho avy indray Kristy » ary dia tonga nanatrika izany isan-kariva izy. Nandrara azy anefa ny tompon’ny Hotely tsy ho any intsony kanefa rehefa noreseny lahatra dia babony hanatrika ny kaonferansa ihany koa io. Nohazavain’ny mpandahan-teny ny Pasitora DEXTER ny Daniela 8 sy ny Fitsarana ary ny fiafaran’izany dia ny fiavian’i Kristy. Babon’ny fahamarinana i Rosle. Reny ihany koa ny amin’i [[Elen WHITE]] ka dia nanam-paniriana mafy ny mba hihaona aminy any [[Californie]] ([[Etazonia]]) US izy. Main’ity hafatra vao hitany anefa i Rosalinda le MEME ka ny hody hanambara izany no nahamaika azy kokoa. Natao batisa tao Lausanne izy ny volana Desambra 1911. Ny volana Marsa 1912 izy no nody tany Maurice, nitondra boky sy gazety maro - soratanan’i Ellen WHITE ary tody tany Maurice ny volana Jiona 1912.▼
▲Niandoha tany Maurice ny niandohan’ny fahatongavan’ny hafatra teto Madagasikara.
▲Niala tao Port-Louis (Mauritius) haka rivotra tany Eoropa i Rosalinda le MEME tamin’ny Jolay 1910. Tonga hatrany Angleterre sy Ecosse ary Pays des Galles izy. Naharitra herintaona ny diany tany. Rehefa izany dia nanohy ny diany nankany Frantsa izy. Niova anefa ny fandaharam-potoanany raha tonga tao Paris ka lasa izy nankany Suisse. Tonga tao Lausanne izy ary nitoby tamina Hotely iray an’ny havany manamorona ny làlana « Beau séjour » . Nisy taratasy iray natsofok’olona tamin’ny boîte aux lettres teo am-baravarany, taratasy fanasana ho amin’ny kaonferansa izy io. Lasa nankany izy ka ny lohateny novoasana dia ny hoe : « Mankaiza moa izao tontolo izao ? Ho avy indray Kristy » ary dia tonga nanatrika izany isan-kariva izy. Nandrara azy anefa ny tompon’ny Hotely tsy ho any intsony kanefa rehefa noreseny lahatra dia babony hanatrika ny kaonferansa ihany koa io. Nohazavain’ny mpandahan-teny ny Pasitora DEXTER ny Daniela 8 sy ny Fitsarana ary ny fiafaran’izany dia ny fiavian’i Kristy. Babon’ny fahamarinana i Rosle. Reny ihany koa ny amin’i Elen WHITE ka dia nanam-paniriana mafy ny mba hihaona aminy any Californie US izy. Main’ity hafatra vao hitany anefa i Rosalinda le MEME ka ny hody hanambara izany no nahamaika azy kokoa. Natao batisa tao Lausanne izy ny volana Desambra 1911. Ny volana Marsa 1912 izy no nody tany Maurice, nitondra boky sy gazety maro - soratanan’i Ellen WHITE ary tody tany Maurice ny volana Jiona 1912.
Notantarain’i Rosie ny diany sy ny fahamarinana vaovao vao azony ny rehetra ka gaga. Narary i Alice rahavaviny ka nanoro hevitra azy hamonjy ny toerana avo tany La Réunion ny dokotera . Dia lasa tany izy mirahavavy ka nitory tany sady nitsabo tena, Dia tafiditra tao ny hafatra.
Ho setrin’izany dia nalefan’ny Conférence Générale ho azy ny vola $800 hanampiana azy miaraka amin’ny boky sy gazety maro toy ny « Present Truth » (Fahamarinana ankehitriny). Voadikany sy voatontany ny boky tamin’ny volana jona 1919. Nanokatra kiosk / Librairie kely tao Andravoahangy izy ary teo no nivarotana ireo boky « Ny dia ho eo amin’i Kristy » ireo. Io kiosk io no loharano nampipariaka ny hazavan’ny fahamarinana teto Madagasikara. Sonian’olona folo anefa no ilaina vao afaka manangana Fiangonana ka teo am-pivarotana io boky io no natsipitsipy ny resaka ary izay liana ka nazoto dia noraisina ho mpikambana.
Nampalahelo anefa fa maty novonoin’olona tao an-tranony tao [[Anjiro]] i Antoine TUYAU kanefa ny rà nalatsany no vao maika lasa zezika nampitrembona sy nampirobona ny voan’ny Fahamarinana teto Madagasikara.
Rehefa ren’ny tany Maurice ny fanombohan’ny asa taty Madagasikara dia naniraka ny Pasitora Marius RASPAL izy hampianatra an’i André RASAMOELINA sy ireo namany nandritra ny telo volana. Rehefa izany dia niverina tany Maurice izy ary notendrena hiasa feno taty Madagasikara tsy ela taorian’izay mba hanangana ny Fiangonana. Notokanana ary ny fiangonana voalohany tao [[Manjakaray]] ny 27 Aogositra 1927. Ny 09 Oktobra no natao batisa ireo advantista 4 voalohany tao Manjakaray. Rehefa izany dia lasa nody tany Frantsa i Marius RASPAL ka ny Pasitora Joseph BUREAUD no nalefa hitantana voalohany ny asa taty. André RASAMOELINA no sekretera ary CM RAMIAKABOLA no mpitahiry vola.
Nisy Géometre cadre anankiray antsoina hoe Jean RAMAMONJISOA izay nikaroka ny Fahamarinana ary rehefa nandinika izany andro vitsivitsy izy dia nanapa-kevitra handroso ka nandao ny asany mihitsy mba hahazoany mitandrina ny Sabata. Izy no mpitandriana Advantista faharoa teto Madagasikara.
Nisy mpino advantista vitsivitsy nanolo-tena hampiely boky. Anisan’ireny RASOLOFO sy RASINORO vadiny. Nankany Antsirabe RASINORO ka tonga tao an-tokantranony ‘i RAJOELY mpampianatra tao amin’ny Sekoly Normaly Loteriana. Nitory ny Fahamarinana taminy RASINORO. Raha sendra niakatra tany Antananarivo izy dia nahita ilay boky kely hoe « Ny Dia ho eo amin’i Kristy » : babon’ny fahamarinana izy sy ireo zanany roalahy RABARIJOEL Jerôme sy RAJOELISON izay lasa mpitandina diso fantatry ny fiangonana Advantista eto Madagasikara.
Nisokatra taorian’ny Manjakaray ny fiangonana faharoa teny [[Tsararay]] avy eo nitsangana ny teny [[Anosibe]] sy teny Ambohijafy - [[Itaosy]].
Tamin’ny taona 1933 dia novidiana ny tranon’ny mpaka fo iray tao [[Ambohijarovo]] ary dia natao fiangonana sy foiben’ny asa. Nanao kaonferansa nandritra ny herintaona sy tapany ny Pastitora RABARIJOEL. Malaza tamin’izany ny kaonferansa « Ny ho avy mamirampiratra ». Be ny vokatra ka dia nitady toerana hafa hanitarana ny asa. Dia natsangana ny tao Mandrosoa - 50 Làlana Andriandahifotsy handraisana ireo mpino vaovao tamin’ny 1933.
1934 : nosokafana ny Sekoly Advantista teo Ankadifotsy izay nampitondraina ny anarana heo MARANATA taty aoriana. Araka ny torohevitry ny Fanahin’ny Faminaniana (1872) dia tokony haorina eny ambanivohitra ny Sekolintsika. Koa tamin’ny 1938 dia naorina ny Kolejy tany Soamanandrariny. Natao ny fiofanan’ny mpampianatra evanjelistra (Instituteurs Evangeliste) koa ny Kolejy ka nahitana mpianatra maro hatrany Afrika.
Tamin’ny 1947 no nanomboka ny fandaharana amin’ny teny frantsay tao amin’ny [[Radio Tananarive]] tao Antaninarenina ny Pasitora Jean ZURCHER, Talen’ny Kolejy. Nanao fandaharana 146 momba ny fanabeazana nosoratan’i Maurice TIECHE sy fitoriana Soratra Masina tao izy. Nandimby azy tamin’ny teny Malagasy ny Pasitora RABARIJOEL Jerôme sy RAJOELISON nanomboka ny 1949. Nosokafana tamin’izany koa ny Imprimerie Adventiste tao Soamanandrariny izay nanampy betsaka tamin’ny fampielezana ny hafatra.
Efa nananika ny 76.000 ankehitriny ny Malagasy Advantista izay manana Fiangonana (voalamina sy tsy voalamina) mihoatry ny 1200. Mitahy ny asany sy ny Fiangonany tokoa ny Tompo ary mitantana azy amin’ny fomba mahavariana !
[[Sokajy:Fiangonana ao Madagasikara]]
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/wiki/Manokana:MobileDiff/798527"